DEG DEG:- Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo oo gaaray magaalada Kampala – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo oo gaaray magaalada Kampala
Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa goordhaw gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, iyadoona si diiran halkaasi loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kampala kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dalkaasi iyo sidoo kale mas’uuliyiinta safaarada soomaalida ee ku taallo dalkaas.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmi doonno dhiggiisa dalkaasi Uganda Yoweri Museveni, iyagoona ka wada hadli doonno xiriirka labada dal, iyadoona dalka Uganda ay ka mid tahay dalalka ay ciidamada ka joogaan dalka Soomaaliya.
Safarka madaxweyne Farmaajo ee dalka Uganda ayaa qeyb ka ah dadaallada ay dowladda federaalka Soomaaliya ku xoojineyso xiriirka saaxiibtinimo ee gobolka iyo sidii hal meel looga soo wada jeesan lahaa argagixisada dhibaatada ku heysa dadka shacab ah.
Waa markii ugu horeeysay uu madaxweyne Farmaajo booqasho ku tago dalka Uganda, tan iyo markii xilkaan loo doortay 8-da bisha Febraayo ee 2017-ka.
Dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo uu safar kala duwan ku kala bixiyay dalalka dariska ah ee Itoobiya Kenya iyo Jabuuti, halkaasi oo uu kulamo kula soo qaatay madaxda dalalkaas.